မောငျ(စှယျစုံကမျြး): November 2012
ကောင်းကင် မြေပြင်နဲ့ရေပြင်တောတောင်ကြား
ရှင်သန်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အိုလူသားတို့ 
ယုတ်မာဆိုးတေ၊ ညစ်ပတ်ပေတဲ့ 
အကျင့်ဟောင်းတွေ ပျောက်ပါစေလို့ 
ညီငယ်များနှင့်နှမအရွယ်၊ တူအရွယ် သားငယ်တို့ အား
ဖြူစဉ်နုခါ သင်ကာပြစို့ 
ဘ၀ဖို့.....။
စာနာအားကို မေတ္တာရေနဲ့ လောင်းကာပက်လို့ 
အမြင့်ကိုတက် ညွန့် ခက်ပမာ
နုထွက်ဝေအောင် တို့ တွေအပေါင်းက
မေတ္တာရေနဲ့ လောင်းလို့ပေါင်းသင်ပေးကြစို့ လား
ငယ်နုစဉ်က မသင်မပြ မဆုံးမပဲ
(ဂေါင်း)ခေါင်းကိုချမှ ပြင်လို့ မရ
ဆုံးမ မလွယ် လူ့ ဘုံအလယ်
လူယုတ်မာမျိုး အကျင့်ဆိုးနဲ့ 
နာမည်ကျော်လာ အိုမြန်မာတဲ့ လား.....
သမိုင်းရဲ့အဖြူဆုံးပန်း ဗိုလ်အောင်းဆန်းတို့ 
သမိုင်းကျော်ကြား အလောင်းဘုရားတို့ များ
မိန်းမယုတ်နှင့် ပြည့်အရှုပ် လူယုတ်မာတို့ 
အရက်ဘီယာ ယမကာနဲ့မလုံမလဲ မာဆက်စ်ထဲမှာ
ပျက်စီးနေပီ ktv လည်းပါလေရဲ့။
သင်္ကြန်ကာလ ပြောပြဖို့ တောင်
မသင့်ပေဘု....တို့ ယဉ်ကျေးမှု့ တဲ့လား?
သိုက်ကြီး ( ကျောက်ပန်းတောင်း)
Author Anonymous at 7:05:00 AM2မှတ်ချက်
Labels: သိုက်ကြီး( က.ပ.တ )၏ကဗျာများ
အကူညီတောင်းတဲ့အခါ( သို့ )ကွန်ပျုတာအတွက် တစ်ခုခုရှာတဲ့အခါ ဒီနည်းသုံး
ဒီနည်းက ဗဟုသုတရဖွယ်တွက်ပါ။ မေးထဲကို စက်အတွက် တစ်ခုခုရှာခိုင်းတဲ့စာတွေ
အကူညီတောင်းတဲ့စာတွေ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ စဉ်းစားရခက်ဖူးပါတယ်။ ၀င်းဒိုးက
ဘာလဲ မန်မိုရီဘယ်လောက်ရှိသလဲ မော်ဒယ်ကဘာလဲ ဘာအမျိုးစားလဲ ဆိုတောကို
သေသေချာချာ သိမှ ကူညီတဲ့သူက ကူညီဖို့ လွယ်မှာပါ တချို့ ရှိပါတယ် ။ဘာဝင်းဒိုး
တင်ထားလည်းမသိဘူး ဘာဝင်းဒိုးလည်းမေးတော့ မိုက်ခရိုဆော့ ၂၀၁၀ တဲ့..သေပီ
တခြားဟာတွေဆက်မေးရင် ဝေးသွားပီ မိုင်တစ်ရာလောက် ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင်
VGA Driver ရှာပေးပါဆိုရင် စက်မော်ဒယ် သိမှဖြစ်မယ် နောက်တစ်ခုကIntel လား
AMD လား i3,i5 တွေလား သိဖို့ လိုသေးတယ် ။ စက်လေးနေတယ် သုံးရတာဆိုးပ
ပြောလာတဲ့သူတွေလည်း စက်ရဲ့စနစ်ကို သိဖို့ လိုတယ် ။ ဒါမှ သူ့ စက်နဲ့ လိုက်ဖက်
အံဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြလို့ ရမယ်။ RAM 1GB /Processor Pentium ဆိုရင်
RAM 2GB နဲ့Proessor i3 ထက်တော့ နှေးကွေးနိုင်ပါတယ် ။ သုံးတဲ့ဝင်းဒိုး တူရင်
RAM 1GB ဟာ ၀င်းဒိုး7 သုံးဖို့ မသင့်တော်တဲ့ အပိုင်းမှာပါပါတယ် ဘာလို့ လည်းဆို
Window7System Requirement မှာ RAM 2GB အထက်လို့Miscrosofကြီးက
ပြောထားတဲ့အတွက် 1GB မှာသုံးရင် မနိုင်တဲ့ဝန်ကို ထမ်းရသလို စက်နှေးပါတယ်
မကြာခဏ ဟန်းဖြစ်မယ် ။အဲ့လိုအခါမှာ ထည့်ထားတဲ့ဆော့ဝဲကလည်း Photoshop
Autocad တွေဖြစ်ပြန် စနစ်တကျ ရှင်းလင်းဖျက်ထုတ်မှု မရှိပြန်ဆိုရင် မလွယ်ပါဘူး
တချို့ ဆော့ဝဲတွေမှာ System 32( x86 ) နဲ့System 64 မသိရင် ထည့်လို့ မရပါ
နောက်နားက Viber မရဘူးပြောတဲ့အခါ Viber ဟာ ၀င်းဒိုးတိုင်း စက်တိုင်းအတွက်
မရပါဘူး ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျုတာပြဿနာတစ်ခုခုကို စဉ်းစားပေးရတဲ့အခါမှာ
စက်ရဲ့ စနစ်အပြည့်အစုံလိုအပ်ပါတယ် ဒီနည်းကလွယ်ကူပြီး ဗဟုသုတလည်းရမယ်
ဒါကြောင့် ကွန်ပျုတာသုံးသူတိုင်း ကိုယ့်စက်ရဲ့သတင်းအချက်လက် အသေးစိတ်ကို
ကြည့်ရှုတတ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါကြောင်း......................။
Start = All Programs = Accessories = System Tools = System info: မှာ
Author Anonymous at 5:56:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Computerမှာသိသင့်သောပညာများ, အခြေခံကွန်ပျုတာပြုပြင်နည်း
ဘလော့ဂါ လုံခြုံရေးအတွက် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု
ဆဲသံဆူသံ ညံနေတဲ့ ဘလော့ဂါများအတွက် တားဆီးကွယ်ကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလေးက
ကွန်မန့် လာရေးသူတွေထဲမှာ ဆဲသွားတယ် ပြဿနာတက်သွားတယ်ဆိုရင် အဲ့လူကို
နောက်တခါမရေးနိုင်အောင် ရေးပြန်လျှင်လည်း အမှိုက်ပုံးထဲ အလိုလို ရောက်စေတဲ့
နည်းတစ်ခုပါ ဘလော့ဂါတိုင်းဟာ ကောင်းတဲ့ ကွန်မန့် ပဲ လိုချင်မှာပေါ့လာပြီးဆဲထား
ရန်တွေ့ ထားတာကိုတော့ ဘယ်သူလိုချင်မှာလဲနော သူရေးတာ ထိုင်ဖျက်ပေးနေရင်
အလုပ်ပိုတယ် ဆဲလာတဲ့သူကို အမှန်ချစ် Spam ကို နှိပ်ပေးလိုက် နောက်တခါလာပီး
ရေးရင် အဲ့လူရေးတာက Spam ထဲဝင်သွားပြီး စာမျက်နှာမှာ မပေါ်လာတော့ပါဘူး
Owner Approval စနစ်ထားသူတွေကတော့ ဒီနည်းမလိုပါဘူး ဘာလို့ လည်းဆိုတော့
သူတို့ ဖတ်ပီးလို့ အိုကေမှ Publish လုပ်ပေးမှ ကွန်မန့် က စာမျက်နှာပေါ်ကိုလာတာ
အဲ့လိုထားဖို့ က အချိန်မပေးနိုင်တော့ ဒီနည်းနဲ့ ရှင်းနေရတယ် နောက်တစ်ကောင့်နဲ့ 
လာရေးရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘက်က Spam နှိပ်ပေးရုံပဲ သူ့ ဘက်ကတော့
အကောင့်တွေအများကြီး ဖွင့်မှ ရေးလို့ ရတာဆိုတော့ ကြာတော့လည်း မောသွားမှာ
ဆိုတော့ကာ နာမည်ကြီးသူတွေ နဲ့ဆရာတော်တွေ ဒီနည်း ကြုံရင်သုံးသင့်ပါတယ်
တချို့ ဆိုဒ်တွေမှာ အမြင်မတော်အောင် ဆဲထားတာတွေ တွေ့ နေရပါကြောင်း.....။
Author Anonymous at 7:46:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Blog Setting ပြင်နည်းများ, ဘလော့ ပြဿနာများ, ဘလော့ လုံခြုရေးနည်းလမ်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၂ လ ရာသီ ပွဲတော်များအကြောင်း အလွယ်တကူသိစေနိုင်ဖို့ 
ဒီဟာလေးကို ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရင် မြန်မာ ၁၂ လရာသီ ပွဲတော်တွေနဲ့ နေ့ ရက်တွေ
အလွယ်သိနိုင်ပါတယ် နောက်ပီး အဲ့ရာသီမှာ ပွင့်တတ်တဲ့ပန်းတွေနဲ့ရာသီအကြောင်း
ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် တန်ခူးလရာသီ ဆိုရင် မြန်မာနှစ်မှာ ပထမဆုံးလ ဖြစ်ပြီး
ပွင့်တဲ့ပန်းက ပိတောက်ပန်း ပြုလုပ်ကြတဲ့ရေကစား ပွဲတော်အကြောင်း ရှင်းပြတယ်
အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းထားတာဆို နိုင်ငံခြားရောက်သူတွေ မြန်မာနှစ်ကူအကြောင်းမေးရင်
ဒီဟာလေးနဲ့ ရှင်းပြလို့ ရပါတယ် ။ လိုအပ်တယ် ဗဟုသုတလေ့လာလိုရင် ယူလိုက်ပါ
၁၂လ ရာသီအကြောင်း ( Android အတွက်သာ)- https://play./Myanmar Festivals
Author Anonymous at 6:26:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန်
Blog မှာပါတဲ့ နောက်ခံပုံ ပြောင်းနည်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပုံ ထည့်သွင်းနည်းပါ
ဒီနည်းကတော့ မကလိလို့မသုံးဖြစ်တာနေမယ် ဘလော့ကို နောက်ခံပုံ အများကြီး
သူ့ မှာပါတဲ့ နောက်ခံ ပြောင်းချင်ပြောင်း ကိုယ်ပိုင် ပုံရှိရင်လည်း ပြောင်းလို့ ရတယ်
ချစ်သူရှိတဲ့သူကတော့ ချစ်သူနောက်ခံပုံလေးနဲ့ ဆို ပိုကောင်း။ပြောင်းစရာရှိပြောင်း
ဒီအဆင့်မှာ သုံးတတ်ရင် ဘလော့ကို စိတ်ကြိုက် အကျဉ်းအကျယ် ဒီဇိုင်းပုံစံကိုမှ
နှစ်လိုင်းထားမလား မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) စတိုင် သုံးလိုင်းခွဲမလားဆိုတာတွေလည်း
ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ် လိုအပ်လို့ အမြန်ပြောင်းချင်ရင် အောက်ကလင့်ကိုနှိပ်..။
အမြန်ရောက်ချင်ရင် နှိပ်လိုက် - http://www.blogger.com/template-Design editor
Author Anonymous at 8:34:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: Template ဒီဇိုင်းလှလှများ, ဘလော့ ပြဿနာများ, ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets
Blogger မှာ စာတင်တဲ့အခါ တင်လို့ မရဘဲ အနီရောင်စာတန်းပေါ်လာခဲ့ရင်
ဒီလိုဖြစ်ကြတာ လူအတော်များပါတယ် အသစ်ဒီဇိုင်း ပြောင်းပီမှ ဖြစ်တာဆိုတော့
သူတို့ အနေနဲ့ ဖြေရှင်းတာလည်း မတွေ့ ရသေးဘူး ဒါပေမယ့် ပြဿနာကြီးတော့
မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ကျနော်လည်း ခဏခဏ ကြုံတာပဲ ။စာတန်းပေါ်လာခဲ့ပီဆို
အပြာရောင်စာတန်းလေး( Ingore...)နှိပ်လိုက် ခဏနေရင် ရသွားတာပဲ စာတန်း
ပေါ်နေတဲ့အခါ အထဲက စာလေးတွေ ပြင်နေရင်လည်း သူ့ အလိုလို ပြန်ပီးတော့
ကောင်းသွားတယ် ။Auto Save လုပ်နေတာဆိုတော့ Save တဲ့အခါ ဖြစ်တာလို့ 
ထင်ရတာပဲ ။ မြန်မာပြည်က ဘလော့ဂါတွေ မရဘူး ပြော သံကြားနေရပါတယ်
ရတဲ့သူလည်း ရနေတာဆိုတော့ ရလို့ စာတွေ တင်နေကြတာပဲ..... try again...?
လိုင်းမကောင်းရင် အဲ့စာက ပိုပြီးပေါ်တယ်..ရုံးမှာတော့ မပေါ်ဘူး..ဖလမ်းဖလမ်း
မရတဲ့သူများ - http://www.muhbalak.com/2012 Posting error
မရတဲ့သူများ - https://productforums.google.com/foruM
Author Anonymous at 8:12:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Blog Setting ပြင်နည်းများ, Website နဲ့Blog နည်းပညာများ, ဘလော့ ပြဿနာများ
မိမိတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုဒ်လေးတွေမှာ MYMC မြန်မာရေဒီယိုထည့်ချင်ရင်
ဒီနည်းကတော့ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ မေးတဲ့သူတွေကိုတော့ ချက်
တင်ထဲကနေ ပို့ ပေးပီးပါပြီ နောက်လိုအပ်သူများ ရယူနိုင်ဖို့ဘလော့ထဲမှာတင်
ထားလိုက်ပါတယ် ဘလော့ရေးနေရင်း အဖြူရောင်သံစဉ်က လွှင့်တဲ့ သီချင်းများ
ကို အလွယ်တကူ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် လိုင်းက လွှင့်တာဆိုတော့ လာချင်
တာလာတာ တစ်ခါတလေ ပရိတ်သတ် တောင်းဆိုတာတွေလည်း လာနေတာ
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ အတွက် ဒီသီချင်းလေးကို တောင်းဆိုထားတာပါ ဘာညာ
ပြောနေတာပဲ ကြိုက်တာရွှေးဖွင့်နေရတာထက်စာရင် ၀က်ဆိုဒ်မှာ ထည့်ထား
တော့ စာဖတ်သူများ လာရင်လည်း နားထောင်ရတာပေါ့ နားမထောင်ချင်လည်း
ပိတ်ထားလို့ ရပါတယ် အခြေခံဝါသနာရှင်လေးများ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ.....။
အောက်က ကုဒ်တွေ ယူထည့်လိုက်ပါ ။
<a href="http://radio.mymclub.net"><img src="http://www.mymclub.net/main/images/misc/mymcradio_logo.png" border="0" alt="MYMC Radio" title="Go to MYMC Radio page" width="240" height="50" style="border: 0pt none; align:center;" /></a><iframe style="border:none;"src="http://www.mymclub.net/main/specialprogram/temp/radio_stats_2.php" width="px;"></iframe><object style="width: 300px; height: 45px;" classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="300" height="45" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="url" value="http://radio.mymclub.net" /><param name="src" value="http://radio.mymclub.net" /><embed style="width: 300px; height: 40px;" type="application/x-mplayer2" width="300" height="45" src="http://radio.mymclub.net" url="http://radio.mymclub.net"></embed></object>
မူရင်းလင့် - http://www.mymclub.net/Radio
Author Anonymous at 11:41:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets
Window Update ကို ပိတ်ထားသင့်သလား(သို့ ) ဖွင့်ထားသင့်သလားဆိုတာက
ဒါကတော့ လိုင်းကောင်းရင် အင်တာနက်မြန်ရင် ဖွင့်ထားတာက ကိုယ့်စက်အတွက်
အကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးတဲ့ဝင်းဒိုးက မူရင်းမဟုတ်ပဲ
Copy ဆိုရင် Update လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Genuine ပြသနာဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်
များသောအားဖြင့် ၀င်းဒိုး Key နဲ့ အစစ်အမှန် သိပ်မသုံးကြဘူး Genuine ပြဿနာ
ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေ ရှိတာမို့အဆင်ပြေပါတယ် ။ သာမာန်သုံးဆိုရင်
ပိတ်ထားလည်း ပြဿနာမဖြစ်ပါဘူး အရှင်းလင်းဆုံး အဖြေကတော့ လိုင်းကောင်း
အင်တာနက်မြန်ဆို ဖွင့်ထားတာဟာ ရေရှည်အတွက် အကျိုးများစွာ ဖြစ်စေတယ်
ကျနော်တို့ ရုံးမှာတော့ လိုင်းကောင်းလို့ ဖွင့်ထားပါတယ် ...................................။
ဒီမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် - benefits-windows-automatic-updates
Author Anonymous at 8:59:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Window Genuine ဖြေရှင်းရန်, စွယ်စုံ အထွေထွေ ဗဟုသုတ
လတ်တလော ရေးတင်လိုက်တဲ့ပိုစ်တွေကို Plain Slide လုပ်နည်း ( လန်း၏ )
ဒီဟာလေးကတော့ ဘလော့ဂါတို့ အတွက် အဆင်ပြေစေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ
လတ်တလော ရေးတင်ထားတဲ့ ပိုစ်တွေကို စာဖတ်လာသူတွေ အလွယ်တကူ ရှာဖို့ 
ဖတ်နိုင်စေဖို့ပြုလုပ်ပေးတဲ့နည်းပါ Slide Showပုံစံလေးနဲ့ရှင်းလင်းမြင်သာစေတယ်
လုပ်ရတာလည်း 3ဆင့်ထဲမလို့အရမ်းလွယ်ပါတယ်..လိုအပ်သူများ သုံးကြည့်ပါ......။
ဒီလင့်မှာ သွားလုပ်ပါ - http://www.surfing-waves.com/ Recent Post Slide
ကျနော့်ဆိုဒ် မလေးရှားသတင်းအောက်မှာ တင်တဲ့ပုံစံလိုချင်ရင် ကုဒ်ယူထည့်လိုက်
<!-- start sw-rss-feed code -->
rssfeed_url = new Array();
rssfeed_cache = "aa502251a6f1660ab0f1217d49c73284";
<!-- The link below helps keep this service FREE, and helps other people find the SW widget. Please be cool and keep it! Thanks. -->
<div style="text-align:right; width:180px;"><a href="http://www.surfing-waves.com" target="_blank" alt="www.surfing-waves.com"><img src="http://img.surfing-waves.com/images/swlogo.png" border="0" alt="surfing waves" /></a><a href="http://www.surfing-waves.com/feed.htm" target="_blank" style="color:#ccc;font-size:10px">feedwidget</a></div>
<!-- end sw-rss-feed code -->
Author Anonymous at 9:39:00 PM3မှတ်ချက်
"နေတတ်ပါစေ သူငယ်ချင်း "
ကိုယ့်အကြောင်းကို ကွယ်ရာမှာ မကောင်းပြောခဲ့ရင်
လောကကြီးက နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ။
Cinthi ( GTC )
Author Anonymous at 7:59:00 AM6မှတ်ချက်
Labels: Cinthi ရေးသော ကဗျာများ
Sever 2003 အတွက် သီးသန့်Anti Virus ဆော့ဝဲလေး ( ဟိုဟာနဲ့ မတူဘူး)
ဘယ်ဟာနဲ့ မတူလည်းဆိုတာကတော့ အရင်တင်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲကို ပြောတာပါ
ဒီဟာက Server 2003 အတွက်ရတယ်။ များသောအားဖြင် သုံးတာ မတွေ့ ရပါဘူး
ဒီဝင်းဒိုးကလည်း Miscrosoft ကနေ 2003 April မှာ စတင်ထုတ်ပြီး အရင်ကထုတ်
ထားတဲ့ 2000 ကို အခြေခံထားတာပါ ။မသုံးတော့ မသုံးဖူးပါဘူး တိုက်ဆိုင်သူတွေ
ရှိနေသေးလို့Sever 2003 သူ့ အတွက် တင်လိုက်ပါတယ် အောက်မှာယူလိုက်ပါ
English | .....
မူရင်းလင့်ကတော့ = http://freewareupdate..com/antivirus-spyware
Author Anonymous at 10:28:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနဲ့Anti Virus
အလုပ်များသူတွေအတွက် Desktop ပေါ်မှာ Note ထားနည်း(၁၅-၁၁-၁၂)
အထူးသတိပြုစရာတစ်ချက်ကတော့ Window default Font ကနေပြောင်း မရပါ
ဒီလင့်မှာ သွားပြီးဖတ်ကြည့်- http://.answers.microsoft.com မရဘူးပြောတယ်
Window7Forums မှာလည်း မရလို့ ပြဿနာ တက်နေသူတွေရဲ့ အကြောင်းကို
http://www.sevenforums.com မှာ ဖတ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေအဖို့ 
အဆင်ပြေဆုံးနည်းကတော့ Wordpad ကို သုံးပါ Window တိုင်းမှာ ပါလာတယ်
Notepad ကနေ ရေးရင်မရပါဘူး Wordpad ဖွင့်ပါ။ မြန်မာလိုရေးပီး ကော်ပီယူပါ
Desktop ပေါ်က Sticky Note ပေါ်ချလိုက် မြန်မာလို ပေါ်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ....။
Wordpad ကိုလည်း အောက်ပါနည်းဖြင့် ရှာနိုင်ပါတယ် အတူတူပါပဲ...............။
Start => All Programs =>Accessorie မှာရှိတယ် ။Serch box မှာလည်း ရှိတယ်
ဒီနည်းကလည်း Window7မှာပါလာတဲ့ Sticky Notes စနစ်တစ်ခုပါ ။အလုပ်အရမ်း
များသူတွေအတွက် နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှလုပ်စရာရှိတာတွေကိုမှတ်မိလွယ်အောင် အလွယ်
လုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် မိမိကွန်ပျုတာ Desktop ပေါ်မှာမှတ်စုတို လေးတစ်ခုအဖြစ်
ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ် အလုပ်ကပြန်ခါနီး နောက်ရက် အလုပ်လာရင် အရေးတကြီး
လုပ်စရာရှိရင် ဒီနည်းလေးနဲ့ မှတ်ထား နောက်တစ်နေ့ ကွန်ပျုတာဖွင့်တာနဲ့ Desktop
ပေါ်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်နေဂျာ ကွန်ပျုတာမှာ ရေးထားတာတွေ့ လို့သုံးချင်
တဲ့သူတွေ သုံးရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်(Window7သမားတွေအတွက်ပါ).....။
Author Anonymous at 6:53:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Computerမှာသိသင့်သောပညာများ, Window7၏ အားသာချက်, ကွန်ပျူတာအတွက်မြန်မာဖောင့်များ
Android Phoneအတွက်သူခိုးငတက်ပြားGame-ရွာက နွားတွေသတိရတယ်
ဒီဟာလေးကတော့ မြန်မာ့ ဆိုင်းဝိုင်းအသံလေးနဲ့ဆော့လို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ
ပစ်တာခတ်တာ ၀ါသနာပါပေမယ့် မြန်မာတွေ ထွင်ထားတာဆိုတော့ များများလေး
အားပေးကြပါ ဗျို့ ..။ နောက်မှ စနိုက်ပါ ဂိမ်းတွေ ထွင်းခိုင်းရမယ်..Play ကပဲယူပါ.။
ဒီလင့်မှာ ယူပါ - www.mediafire.com/download.ငတက်ပြားဂိမ်း
လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူ - https://play.google.com/သူခိုးကြီးငတက်ပြား ဂိမ်း
အင်စတော မလုပ်တတ်ရင် အောက်က လင့်မှာ ဖတ်ပါ....။
Androit ဖုန်းကို Memory Card မဖြုတ် ကြိုးမသွယ်ပဲ အင်စတောလုပ်နည်း
Author Anonymous at 6:01:00 PM2မှတ်ချက်
နင်စိတ်မချဖြစ်မှာစိုးလို့ ငါဝိတ် မချတာကို
နင်က ငါသိပ်ဝတယ်ဆိုပီး ဟားတိုက်ချင်တာလားချစ်သူ
တစ်ဖက်လူကို အနိုင်ယူချင်တဲ့ မင်းစိတ်ဓါတ်ကို
ငါကတော့ ဟောင်းနေတဲ့ ငါ့စတိုင်ကို
အသစ် အသစ်တွေဖြစ်နေတဲ့ မော်ဒယ်ခေတ်မှာ
မင်းက ဖလမ်းဖလမ်းတွေကိုမှ အရမ်းငမ်းချင်တယ်ဆိုရင်
ငါ့ဘ၀ရဲ့ အဝေးဆုံးကို အချင်းမများပဲ မင်းသွားလိုက်ပါ
ကျန်နေသေးတဲ့ ငါ့ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို
Cinthi ( G.T.C )
Author Anonymous at 11:20:00 AM4မှတ်ချက်
အခြေခံ ကွန်ပျုတာ စတင်သုံးစွဲသူများနဲ့ အမှတ်မထင် မှားတတ်သူများအတွက်
ဒီနည်းလေးကတော့ ဖြစ်တဲ့သူသိပ်မရှိဘူး။ တခါတလေ ဖြစ်ခဲ့ရင် သုံးနိုင်သိနိုင်ရန်
မျှဝေလိုက်ပါတယ် ကွန်ပျုတာအောက်ခြေက task bar ဘေးဘက်တို့ အပေါ်တို့ 
ရောက်သွားရင် ပြန်ပြင်တဲ့နည်းပါ လုပ်နည်းက လွယ်တယ်။ ဘေးရောက်သွားတဲ့
Task Bar ပေါ်မှာ Right Click ထောက်၍ Properties နှိပ်ပါ ပေါ်လာတဲ့အကွက်
အကွက် Task bar location on screen မှာ Bottom ပြောင်းပေးလိုက်ပါ........။
Author Anonymous at 5:40:00 PM0မှတ်ချက်
ရင်ထဲကို အေးမြစေပါတယ် အမေ.........။
မြူခိုးတွေ ရစ်ဝိုင်းနေတဲ့ တောင်တန်းတွေရဲ့ကြား
ငုပ်လျှိုး ကွယ်ပျောက်တော့မယ့် နေလုံးနီနီ
မျက်လွှာလေးချ အိပ်စပြုနေတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေ
ကျွန်တော် အွန်လိုင်းပေါ် မျက်စိမှောက်ခဲ့ရပြီ............။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သိမ်းပိုက်ချင်နေကြတဲ့
ခေတ်မှီတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက တင်ဆက်တဲ့ ခေတ်မှီတဲ့
ကျွန်တော် ရင်တွေ ပူနေတယ် အမေ............။
မြက်ဖျာပေါ် အိပ်ရတာ အေးမြပါတယ်
ညံ့ဖျင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်လို့ ထင်မလား
လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့ကို လိုလားတယ်အမေ.............။
စေတနာ ရှေ့ထားတဲ့ အမေ့ရဲ့
မေတ္တာပို့ တရားသံကို လွမ်းတယ်
နံနက်ခင်း အာရုဏ် အတက်မှာ
နှလုံးသားကို အေးမြစေခဲ့တာ အမှန်ပါ
လောဘ မုဆိုး တွေ ပေါများပြီး
လူတွေပြန်ပြီး ဖျက်စီးနေကြတယ်လို့ တွေးမိရင်
ဒါ (ခေတ်မှီလာတဲ့) မြို့ပြရဲ့ စရိုက်တွေပေါ့..........။
Author Anonymous at 8:18:00 PM 8 မှတ်ချက်
ဆင်းရဲဒုက္ခတိုင်း နှစ်ကိုယ်ကြား ဘာသာဗေဒနဲ့
ကမ္ဘာကြီးထက် ကမ္ဘာစစ်က ပိုပြီးရွံဖို့ကောင်းပါတယ်...တဲ့
အမြောက်ဆံတွေ လက်ပစ်ဗုံးတွေ ထည့်သယ်နေကြရပုံပေါ့
စစ်တိုက်ဖို့ ဘယ်သူက ခွန်အားမျှခဲ့တာပါလဲ
Author Anonymous at 9:31:00 PM0မှတ်ချက်
ကျွန်တော်ရောက်လေရာ ခေတ်စံနစ် တစ်ခုခုကနေ
မိုးလလွတ်ကင်းပြီးစ စွယ်တော်ပွင့်ကလေးတွေ သိကြတယ်။
ဘူတာရုံဆွေးဆွေး ကဖေးအိုအိုထဲက လွင့်ပျံလာတဲ့သီချင်းက
မြတ်နိုးဖွယ်ရာ စကားဘယ်နှခွန်း ထွက်ကျလာမှာလဲ
ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ ဆောင်းအတု နှင်းအတု
မေတ္တာအတုတွေနဲ့ လက်တလှုပ်လှုပ် နှလုံးသားတလှုပ်လှုပ်
မြစ်ရေပြင်ပေါ် လရောင်တွေ ကိုယ်ဖော့ပြေးနေသလိုပေါ့။
နူးညံ့စွာ တိုးဝင်ခဲ့ကြပြီ။ ။
Author Anonymous at 6:05:00 PM0မှတ်ချက်